Maitiro matsva evafambi kuenda kuDominica
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Dominica Kuputsa Nhau » Maitiro matsva evafambi kuenda kuDominica
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Dominica Kuputsa Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
vafambi ku Dominica
Dominica iri kutevera kutungamira kweimwe nyika dzeCaribbean dzakasimbisa pakuongorora kwe COVID-19.
Vafambi vanobva kuAntigua neBarbuda vanofanirwa kushandira COVID-19 padanho rine njodzi huru.
Vashanyi vanofanirwa kuzviisa mukuyedzwa nekuisa kwavo vega.
Yakachengeteka Mune Zvakasikwa "Yakatungamira Zvakaitika" inodiwa.
Hurumende yakagadzirisa ayo COVID-19 nyika njodzi dzekuisa vafambi kuenda kuDominica zvichibva neshanduko muhuwandu hwezviitiko zveCOVID-19 munyika dzakavakidzana.
Antigua neBarbuda vakaiswazve kune iyo YAKAKOSHA-RISK kupatsanura mazuva mashoma apfuura zvekuti izvozvi vafambi vekuDominica vanofanirwa kuendesa fomu repamhepo rekuongorora hutano uye vatumire yakaipa PCR bvunzo uko swabs dzakatorwa mukati memakore makumi maviri nemana nemakumi maviri nemaviri ekusvika muDominica.
Pakubuda pachiteshi chekupinda, vafambi vanoendesa kune yekuvharirwa kwenguva inosvika mazuva manomwe apo bvunzo yePCR inotorwa pazuva rechishanu mushure mokusvika uye mhedzisiro inotarisirwa mukati maawa 7-5. Vafambi vanofanirwa kuzviisa kunzvimbo inofanirwa kugara kwavo uye vanogona kusarudza kugara vega kunzvimbo inochengetwa nehurumende kana kunzvimbo yakachengetedzwa yeChitarisiro muPasi pasi pe "Chiitiko Chakachengetedzwa."
Vakachengeteka muKuzvipira Kuzvipira uye Anogoneswa Zviitiko anowanikwa kune vese vashanyi, kusanganisira vashanyi vanobva kune njodzi-dzakapatsanurwa nyika dzakashanyira Dominica. Rumwe ruzivo nezve yakachengeteka muKuzvipira Kuzvipira uye Yakagadziriswa Zviitiko uye yakazara yakazara rondedzero yengozi kurongeka kwenyika iri iripo pano.
Tsvaga Dominica Chiremera ichienderera mberi ichishanda pamwe nevakuru vezvehutano kuona kuchengetedzeka nekuchengetedzeka kwevashanyi kuchitsuwa ichi, pamwe nevatambi vezvekushanya kuti vaone chiitiko chakasarudzika chakatariswa nenzira yakatarisirwa.
Maitiro matsva ekuuya kwevanofamba
Dominica yekushanyirwa uye nezviremera zvehutano zvakatanga matanho matsva ekuvandudza kuongorora uye kumanikidza kutevedza kwehutano nekuchengetedza zvibvumirano nevafambi. Zvino, vese vanosvika vafambi nevashandi vari kuzotora nguva yekuzvitsaura, vanozopihwa mabhandi-ane mavara-mavara. Mabhanhire ewrist anoiswa paruoko rwevapfuuri neruoko rwechiremba pazviteshi zvese zvekupinda uye vanozopihwa zvinotevera.
Vafambi vanenge vachisungirwa kugara voga kunzvimbo yakachengetedzeka muKachengeteka Muzvinhu vanozopihwa bhande rebhandi rebhuruu.
Vafambi vanenge vachisungirwa kugara kwavo kwavo vega kunzvimbo yehurumende vanozopihwa mabhandi eworange orenji.
Vafambisi uye vafambi pazvikepe zvinotakura zvinhu uye yatchtts avo vanozogariswa kwavo pamudziyo vachapihwa mabhandi eworangi oorenji.
Vashandi veAirline vanozoenda nehusiku munzvimbo yakachengeteka muChisimba vachapihwa neon orange armband.
Kufamba nevatakuri vanozogariswa kunzvimbo yakachengetedzeka munzvimbo yakachengetedzeka vachapihwa chigadziko chebhuruu chakareruka.
Vafambi vanozopihwa nzvimbo yekugara vari voga vanopihwa neon red armband. Vaya vanoenda-mukamuri yekuzviparadzanisa paKachengeteka muPfuma chivakwa vanozopihwawo neon green armband, iyo yekupedzisira inoratidza kusungirwa kwekugara.
Vanosungwa, vasungwa uye vanopinda zvisiri pamutemo vanozoiswa kwavo vega kunzvimbo yehurumende vachapihwa bhandi rewhite chena.
Wristbands anongogona kubviswa chete neakasarudzika mushandi wezvehutano, kana iyo COVID-19 poindi munhu ari Akachengeteka muNzvimbo zvivakwa kana iye mufambi achinge abviswa pakurapa. Chirango chemadhora mazana maviri nemazana mashanu chinoshandiswa kana mabhandi echiuno abviswa pamberi pemufambi asati acheneswa. Veruzhinji vanokumbirwa kuti vataure chero zviitiko zvevanhu vanoonekwa kuruzhinji vakapfeka mabhande echiuno.